अरुण तेस्रोबाट रौताहा कन्स्ट्रक्सनले भुक्तानी पाएन - Darshan Daily
अरुण तेस्रोबाट रौताहा कन्स्ट्रक्सनले भुक्तानी पाएन
किमाथाङ्का, २० फागुन । संखुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले डेढ वर्षदेखि भुक्तानी नदिँदा मजदूर समस्यामा परेका छन् ।
आयोजनाको काम सम्झौताअनुसार सम्पन्न गरेको डेढ वर्ष बितिसक्दासमेत भुक्तानी नपाएको रौताहा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका निर्देशक भीमबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।
अरुण तेस्रो आयोजनाको ड्याम साइडमा भारतीय पटेल इञ्जिनीरिङ लिमिटेडले काम गरिरहेको छ । सोही कम्पनीसँग रौताहा कम्पनीले २० करोडको पेटी ठेक्कामा काम गरेको थियो । त्योमध्ये १७ करोड अरुण तेस्रोले भुक्तानी दिएको तर एक करोड ४९ लाख ९० हजार ६६ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको निर्देशक थापाले बताउनुभयो ।
काम सम्पन्न गरेर पटकपटक भुक्तानीका लागि धाउँदा पनि भुक्तानी गर्न आलटाल गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । गत कात्तिक १ गते ८६ लाखको भ्याट बिल काटेर पनि अहिलेसम्म भुक्तानी नपाएको निर्देशक थापाले बताउनुभयो । रौताहा कम्पनीले अरुण तेस्रोमा वि.सं. २०७५ भदौदेखि काम शुरु गरी २०७६ साउनभित्र तोकिएबमोजिमको काम सम्पन्न गरेको छ ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको पावर हाउसमा काम गर्ने सुरक्षागार्डले दुई वर्षदेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् । आयोजनाले गरुड सुरक्षागार्ड कम्पनीका सुरक्षागार्डलाई दुई वर्षदेखिको भुक्तानी नदिएको गरुड सुरक्षागार्ड कम्पनीका प्रदेश नं. १ का प्रमुख देवराम राईले जानकारी दिनुभयो ।
अरुण तेस्रोले दुई वर्षदेखि सुरक्षागार्डलाई भुक्तानी नदिएको प्रमुख राईले बताउनुभयो । अरुण तेस्रोले नौ लाखभन्दा बढी रकम भुक्तानी नदिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अरुण तेस्रोमा अन्य निर्माण कम्पनी र मजदूरलाई समेत समयमा तलब, भत्ता नपाएको बताइएको छ । अरुण तेस्रोले समयमा पारिश्रमिक र काम गरेको पैसा नदिएको भन्दै पटकपटक आन्दोलन हुने गरेको छ ।
उक्त अरुण तेस्रो परियोजनामा कूल एक खर्ब ४४ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२३ भित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने जनाएको छ ।